बलिउडमा अर्काे एक पोर्न स्टारको इन्ट्री, पोष्टरले नै मच्चायो तहल्का - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २८, २०७४ समय: २०:३२:११
मुम्बई । बलिउड अभिनयमा अर्काे एक पार्ने स्टार पनि थपिने भएकी छन् । चर्चित निर्देशक राम गोपाल वर्माको नयाँ चलचित्रबाट अर्काे पोर्न स्टारले अभिनयमा डेब्यु गर्दैछिन् ।फरक धारको चलचित्र निर्माणमा माहिर बर्माले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘गड, सेक्स एण्ड ट्रुथ’का पोेष्टर सार्वजनिक गरिदिएका छन् । पोष्टर सार्वजनिक लगतै शोसल मिडियामा तहल्का मच्चिएको छ । चलचित्रको यो पहिलो पोष्टर हो । यस पोष्टरमा लिड अभिनेत्री निकै बोल्ड अवतारमा देखिएकी छन् ।
चलचित्रकी मुख्य अभिनेत्री चर्चित पोर्न स्टार मिया कल्कोवा रहेकी छन् । पोष्टरका लागि उनले न्युड पोज दिएकी छन् । तस्बिर सार्वजनिक भए लगतै बलिउडका केही हस्तीले पाष्टरलाई अहिले सम्मकै हट पोष्टर भनेका छन् । अभिनेत्री मियाले पनि पोष्टर आफ्नो ट्वीटर मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । पोष्टरका साथमा उनले चलचित्र अभिनयको एक्सपेरेन्स पनि शेयर गरेकी छन् ।
मियाले लेखेकी छन् ‘भारतीय चलचित्र निर्देशक रामगोपाल बर्माका साथ मैले युरोपमा ‘गड, सेक्स एण्ड टुथ’ गरेकी छु । सन्नी लियोन पछि म त्यस्तो पोर्नस्टार हुँ जसले अभिनेत्रीको रुपमा भारतीय चलचित्र अभिनय गर्ने अवसर पाएकी छु ।’ चलचित्र ट्रेलर पनि तयार गरिएको छ । जसको सार्वजनिक १६ जनवरीमा हुनेछ । रातोपाटी
किन कुटिए गायक गंगा बरदान ?
‘भ्वाइस अफ नेपाल’ मा कोच अभया भईन् भावुक र भनिन् : ‘मेरो आँशुले नै सबै भनिसक्यो’
तिनमोहरी साँस्कृतिक साँझ भव्यताका साथ सम्पन्न
गायक गंगा बरदानमाथि कुटपिट
रीमा विश्वकर्मालाई दलित भन्दै कालोमोसो दलिदिएपछी
जात्रै जात्रा : मर्न हाम फालेका ३ पात्र जालोमा परे, जालमा पार्ने को ? टिजरमा हेर्नुस्